Uhlaziyo lwe-PIVX Android Wallet: Isicelo sokuhlawula, inkxaso yoguqululo we-mali ye-Fiat! | PIVX
Uhlaziyo lwe-PIVX Android Wallet: Isicelo sokuhlawula, inkxaso yoguqululo we-mali ye-Fiat!
Njengoko sichazile ukukhululwa kweNdlela ye-Roadmap ka-2018 – sasiqhelisa kuphela i-15 yeziphuculo zethu ezicwangcisiweyo kulo nyaka! Ngelixa iqela lethu le-dev lisasebenza ngokuzikhuseleka emva kwezinto ezihlaziyiweyo eziphambili njengeZPoS kunye neZDEX – siyavuya ukuvakalisa ukuba ukuhlaziywa okukhulu kwisikhwama sethu se-Android sisesekhoyo.
Ezinye iinkalo ezintsha zifakwe kulo mbuyekezo.
Isicelo sokuhlawulwa songezelelweyo
Nge-wallet ehlaziywayo ye-Android, ngoku uyakwazi ukucela imali yentlawulo, kunye nekhowudi ye-QR iya kwenziwa ukuba, xa uhlaziywa ngumthengi, ngokuzenzekelayo uza kufaka idilesi yakho kunye nemali kwi-PIVX ebenetyala kuwe. Ukuvumela ukuthengiswa okulula kunye nokukhawuleza.
Oku kwenza kube lula kubahwebi abafuna ukuwamkela i-PIVX kwaye bahlawulise abathengi babo imali echanekileyo kwimali yabo yasekuhlaleni.
Kuthetha ukuthini oku kubathengisi bamkela i-PIVX:
Ukufumana i-PIVX ngokutshintshiselwa iimpahla kunye neenkonzo ngoku kulula kunanini ngaphambili. Ngenisa nje ulwazi lolwazi (idilesi, imali ehlawulwayo, kunye nenkcazo yemveliso) kunye nekhredithi yeselula iya kwenza abanye! Ikhowudi ye-QR iya kudalwa, kwaye umvuzo omele uhlole kuphela ikhowudi, uhlaziye ulwazi kwaye uqinisekise!
Inxaso yeMali zamazwe amanintsi.
Nge-wallet ehlaziywayo ye-Android, ngoku uyakwazi ukujonga izinga lokuguqulwa kwe-PIVX yakho nayiphi na imali ye-Fiat.
Ukuba noguqulelo lwe-Fiat olwakhiwe kuyo, ngoku ngokulula kulula ukuguqula imali efunekayo kwi-PIV. Khetha nje imali efunekayo kwimali yelizwe lakho, kwaye ulaila! Ngoku unesixa-mali esifanayo se-PIV kwi-bill!
UkuQaphela ukuThengiswa kweZPIV
I-PIVX i-Android yesikhwama sekhredithi ihlaziywa ngoku iyakubona i-PIVX efunyenwe kwintsebenziswano ye-zPIV kwaye iza kubafumana i-credit ngokuvumelana ne-PIVX balance.
I-Mnemonic Phrase Auto-Complete
I-PIVX Android Wallet ehlaziyiweyo ngoku iquka iMnemonic Phrase Auto-Complete. Oku kuya kukuvumela ukuba ufumane i-wallet yakho ngegama leMnemonic lula, kwaye ngokukhawuleza.
Umyalezo wokuvumelanisa ongezelelweyo kwisikrini sasekhaya
Abasebenzisi ngoku baya kubona umyalezo ongaphandle wokuvumelanisa kwisikrini sasekhaya sohlelo lokusebenza xa i-wallet ehambayo ayihambisani. Nceda uvumele ukuhlaziywa kwekhredithi ukucwangcisa ngokupheleleyo phambi kokuthumela okanye ukufumana nayiphi na i-PIV.
Uhlaziyo olongezelelweyo luquka:
* Inketho engaguqukiyo kwesikrini sokukhethwa kweendawo zendawo.
* Qalisa isikhwama sokufumana ukukhangela kwesikrini
Ungayilanda i-PIVX Wallet
yefowuni ze-Android APHA.